လက်တွေ့ဆန်လွန်းတဲ့ ရိုမန့်စ် ရုပ်ရှင်ကား (၃)ကား - For her Myanmar
လက်တွေ့ဆန်လွန်းတဲ့ ရိုမန့်စ် ရုပ်ရှင်ကား (၃)ကား
အမှန်တော့ ရုပ်ရှင်(၃)ကားလို့သာ ဆိုတယ်၊ တကယ်က တစ်ကားတည်းရယ်… ရှုပ်သွားပြီလားဟင် 😛 😛
ဒီတစ်ခါတော့ ယောင်းတို့ကို ဝင်ဒီက တကယ်ကို ကြည့်လို့တန်တဲ့ ရုပ်ရှင် ၃ကား နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ (အမှန်တော့ ရုပ်ရှင်သုံးကားလို့သာ ဆိုတယ်၊ တကယ်က တစ်ကားတည်း၊ တစ်ကားတည်းကိုမှ အဆက်နဲ့ဆိုတော့ ၃ကားဖြစ်သွားတာ။ Trilogy ပေါ့။ အင်း… ဒီသုံးကားတွဲရဲ့ နာမည်က Before Trilogy တဲ့။ ) ဇာတ်ကားတွေကတော့.. Before Sunrise ၊ Before Sunset နဲ့ Before Midnight ။
အဲ့ကားရဲ့ ထူးခြားချက်ကလေ Before Sunrise ပြီးတော့ Before Sunset ကို ဆယ်နှစ်နီးပါးကြာမှ ရုံတင်တာ။ Before Sunset ပြီးတော့လည်း ဆယ်နှစ်နီးနီးပါး ကြာပြီးမှ Before Midnight ကို ရုံတင်တာ။ ဒါ့အပြင် ဇာတ်ကောင်တွေကလည်း မပြောင်းသွားဘူး။ ဒါကလည်း ဒီဇာတ်လမ်းကို ပိုပြီး reality ဆန်စေတယ်လို့ မြင်တာပေါ့နော်။
သုံးကားလုံးအကြောင်းကို ပြောမှာဆိုတော့ Spoiler ပေါ့နော်။ ဒါပေမဲ့ Before trilogy ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ Spoil လုပ်လုပ်၊ သူ့ရဲ့အနှစ်သာရကို ပျက်သွားစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါက သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်ပါပဲ။ ဘာလို့ဆို ဒီကားရဲ့ တကယ့် အနှစ်က ဇာတ်ကွက်တွေမှာ ရှိတာမဟုတ်ဘူး၊ ဇာတ်ကောင် ၂ယောက်ပြောတဲ့ စကားတစ်လုံးစီ၊ သူတို့၂ယောက်ရဲ့ အကြည့်၊ အမူအရာတွေမှာ ရှိတာကိုး…
၁၉၅၅ ခုနှစ်က ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ဂျာမနီနိုင်ငံ၊ ဗီယင်နာမြို့ကို သွားတဲ့ ရထားပေါ်မှာ စထားပါတယ်။ အဲ့ရထားပေါ်မှာပဲ ဂျာမန်လင်မယားနှစ်ယောက်က အော်ကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေကြတယ်။ ဒါက ပြင်သစ်မလေး Celine နဲ့ အမေရိကန်ကောင်လေး Jesse ကို ဆုံတွေ့စေတဲ့ အကြောင်းရင်းပဲ။
ရန်ဖြစ်သံကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်သွားတဲ့ Celine က Jesse ရဲ့မျက်စောင်းထိုး ခုံမှာ သွားထိုင်ရာကနေ ၂ယောက်က မျက်မှန်းတန်းမိသွားပြီး စကားစမြည်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ ရထားပေါ်မှာ စကားဖောင်ဖွဲ့ရင်းကနေ ရထားက Jesse ဆင်းရမယ့် ဗီယင်နာဘူတာကို ဆိုက်လာပါတော့တယ်။ Celine ကတော့ အဲ့ရထားနဲ့ပဲ ဆက်သွားရမှာပေါ့လေ။ အဲဒါကို Jesse က သူနဲ့အတူ ဗီယင်နာမှာ တစ်ညတာကို ကုန်ဆုံးဖို့ Celine ကို ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
သူစိမ်းတစ်ယောက်ရဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်ခံဖို့အတွက်က Celine အတွက် challenge (စိန်ခေါ်မှု) တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ လက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ဒီလိုနဲ့ Celine နဲ့ Jesse ၂ယောက်ဟာ တစ်ညလုံးကို ဗီယင်နာရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းခဲ့တယ်။ စကားတွေပြောတယ်၊ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်သွားတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိစပြုလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ မနက်မိုးလင်းသွားပြီး Celine ဟာ သူ့အိမ်ပြန်ဖို့ ရထားပြန်စီးရတော့မယ်၊ Jesse ဟာလည်း သူ့နိုင်ငံပြန်ဖို့ လေဆိပ်အမီ သွားရတော့မယ်။ မခွဲချင်တဲ့ ၂ယောက်ဟာ နောက် ၆လကြာတဲ့အခါ ဒီနေရာ ဒီအချိန်မှာပဲ ပြန်ဆုံဖို့ ချိန်းခဲ့ပါတယ်…
ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဆုံးသတ်ကတော့ ဒီထိပါပဲ….Celine နဲ့ Jesse တို့ဟာ သူတို့ ကတိတွေအတိုင်း ပြန်တွေ့ခဲ့လား၊ မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုတာကို သိရဖို့ Before ပရိသတ်တွေဟာ ၁၀နှစ်နီးပါးလောက် စောင့်ပြီး Before Sunset မှာမှ အဖြေကို ရှာခဲ့ကြရပါတယ်။
Related Article >>> စကားလက်ဂျိုဟန်ဆန် တစ်ခေတ်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ ခေတ်လွန် သိပ္ပံ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်ကား (၂)ကား
Before Sunset ရဲ့ ဇာတ်လမ်းအစကတော့ ပြင်သစ်က စာအုပ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရဲ့ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲလေးမှာ။ စာအုပ်ဆိုင်လေးက သေးသေးလေး။ စာရေးဆရာက Jesse ။ ဟုတ်တယ်… Jesse က လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်နီးပါးလောက်က သူ့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကို စာအုပ်ပြန်ရေးထားတာ။ သူနဲ့ Celine တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေး။
Celine က အဲဒီ စာအုပ်ဆိုင်ကို လာခဲ့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပဲ သူတို့ဟာ ပဲရစ်ရဲ့ လမ်းတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း စကားတွေနဲ့၊ အရမ်းကို အဓိပ္ဗာယ်ပြည့်ဝလှတဲ့ စကားတွေနဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဘာလို့ဆို သူတို့ မတွေ့ရတာဟာ ဆယ်နှစ်နီးပါးတောင် ကြာသွားခဲ့ပြီကိုး…
Related Article >>> သင်ခန်းစာတွေအများကြီး ယူလို့ရနိုင်မယ့် ဘောလိဝုဒ်ဇာတ်ကား ၂ကား
Before Midnight မှာတော့ အသက်ကြီးကြီးစုံတွဲတစ်တွဲဟာ ကတောက်ကဆဖြစ်နေကြတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ပေးဖို့ ကြိုးစားရင်း သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားတွေဟာ အလှမ်းဝေးနေကြတယ်။ ဟုတ်တယ်… သူတို့ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ်လောက်က ရထားပေါ်မှာ ဆုံခဲ့ပြီး စကားတွေထဲမှာ နှလုံးသားချင်း နီးစပ်ခဲ့သူ ၂ယောက်။ အဲဒီတုန်းက ရန်ဖြစ်နေတဲ့ ဂျာမန်လင်မယား၂ယောက်ကြောင့် သူတို့ ဆုံတွေ့ခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာလည်း မသိတော့ဘူး။ သေးငယ်တဲ့ ကိစ္စလေးအပေါ်မှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဝေးကွာခဲ့တဲ့ နှလုံးသားတွေဟာ…..
ကဲ… ဝင်ဒီ အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ Spoil အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ရေးထားပါတယ်နော်။ ကြည့်ဖူးတဲ့ ယောင်းတွေ ရှိပေမဲ့ မကြည့်ဖူးတဲ့ယောင်းတို့လည်း ကြည့်ဖြစ်အောင် တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အထဲက ဇာတ်ကောင်နှစ်ယောက် ပြောသွားတဲ့ စကားတွေဟာ အရမ်းလှတယ်။ ရိုးမန့်စ်… လက်တွေ့ဘဝနဲ့ အလှမ်းကွာနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ အရမ်းကို လက်တွေ့ကျလွန်းလှတဲ့ ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဇာတ်ညွှန်းကြောင့် ဘဝမှာ ကြည့်ကို ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်လမ်းစာရင်းထဲ ထည့်သင့်တဲ့ကားတွေပါလို့ ညွှန်းပေးလိုက်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ..
Windy (For Her Myanmar)
အမှနျတော့ ရုပျရှငျ(၃)ကားလို့သာ ဆိုတယျ၊ တကယျက တဈကားတညျးရယျ… ရှုပျသှားပွီလားဟငျ 😛 😛
ဒီတဈခါတော့ ယောငျးတို့ကို ဝငျဒီက တကယျကို ကွညျ့လို့တနျတဲ့ ရုပျရှငျ ၃ကား နဲ့ မိတျဆကျပေးမယျ။ (အမှနျတော့ ရုပျရှငျသုံးကားလို့သာ ဆိုတယျ၊ တကယျက တဈကားတညျး၊ တဈကားတညျးကိုမှ အဆကျနဲ့ဆိုတော့ ၃ကားဖွဈသှားတာ။ Trilogy ပေါ့။ အငျး… ဒီသုံးကားတှဲရဲ့ နာမညျက Before Trilogy တဲ့။ ) ဇာတျကားတှကေတော့.. Before Sunrise ၊ Before Sunset နဲ့ Before Midnight ။
အဲ့ကားရဲ့ ထူးခွားခကျြကလေ Before Sunrise ပွီးတော့ Before Sunset ကို ဆယျနှဈနီးပါးကွာမှ ရုံတငျတာ။ Before Sunset ပွီးတော့လညျး ဆယျနှဈနီးနီးပါး ကွာပွီးမှ Before Midnight ကို ရုံတငျတာ။ ဒါ့အပွငျ ဇာတျကောငျတှကေလညျး မပွောငျးသှားဘူး။ ဒါကလညျး ဒီဇာတျလမျးကို ပိုပွီး reality ဆနျစတေယျလို့ မွငျတာပေါ့နျော။
သုံးကားလုံးအကွောငျးကို ပွောမှာဆိုတော့ Spoiler ပေါ့နျော။ ဒါပမေဲ့ Before trilogy ဟာ ဘယျလောကျပဲ Spoil လုပျလုပျ၊ သူ့ရဲ့အနှဈသာရကို ပကျြသှားစမှော မဟုတျပါဘူး။ ဒါက သူ့ရဲ့ ထူးခွားခကျြပါပဲ။ ဘာလို့ဆို ဒီကားရဲ့ တကယျ့ အနှဈက ဇာတျကှကျတှမှော ရှိတာမဟုတျဘူး၊ ဇာတျကောငျ ၂ယောကျပွောတဲ့ စကားတဈလုံးစီ၊ သူတို့၂ယောကျရဲ့ အကွညျ့၊ အမူအရာတှမှော ရှိတာကိုး…
၁၉၅၅ ခုနှဈက ဒီဇာတျလမျးလေးကို ဂြာမနီနိုငျငံ၊ ဗီယငျနာမွို့ကို သှားတဲ့ ရထားပျေါမှာ စထားပါတယျ။ အဲ့ရထားပျေါမှာပဲ ဂြာမနျလငျမယားနှဈယောကျက အျောကွီးဟဈကယျြနဲ့ ရနျဖွဈနကွေတယျ။ ဒါက ပွငျသဈမလေး Celine နဲ့ အမရေိကနျကောငျလေး Jesse ကို ဆုံတှစေ့တေဲ့ အကွောငျးရငျးပဲ။
ရနျဖွဈသံကွောငျ့ စိတျအနှောငျ့အယှကျဖွဈသှားတဲ့ Celine က Jesse ရဲ့မကျြစောငျးထိုး ခုံမှာ သှားထိုငျရာကနေ ၂ယောကျက မကျြမှနျးတနျးမိသှားပွီး စကားစမွညျပွောဖွဈခဲ့တယျ။ ရထားပျေါမှာ စကားဖောငျဖှဲ့ရငျးကနေ ရထားက Jesse ဆငျးရမယျ့ ဗီယငျနာဘူတာကို ဆိုကျလာပါတော့တယျ။ Celine ကတော့ အဲ့ရထားနဲ့ပဲ ဆကျသှားရမှာပေါ့လေ။ အဲဒါကို Jesse က သူနဲ့အတူ ဗီယငျနာမှာ တဈညတာကို ကုနျဆုံးဖို့ Celine ကို ဖိတျချေါခဲ့တယျ။
သူစိမျးတဈယောကျရဲ့ ကမျးလှမျးခကျြကို လကျခံဖို့အတှကျက Celine အတှကျ challenge (စိနျချေါမှု) တဈခုပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ သူ လကျခံခဲ့တယျပေါ့နျော။ ဒီလိုနဲ့ Celine နဲ့ Jesse ၂ယောကျဟာ တဈညလုံးကို ဗီယငျနာရဲ့ လမျးတှပေျေါမှာ ဖွတျသနျးခဲ့တယျ။ စကားတှပွေောတယျ၊ ခွဦေးတညျ့ရာ လြှောကျသှားတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ သိစပွုလာတဲ့ အခြိနျမှာတော့ မနကျမိုးလငျးသှားပွီး Celine ဟာ သူ့အိမျပွနျဖို့ ရထားပွနျစီးရတော့မယျ၊ Jesse ဟာလညျး သူ့နိုငျငံပွနျဖို့ လဆေိပျအမီ သှားရတော့မယျ။ မခှဲခငျြတဲ့ ၂ယောကျဟာ နောကျ ၆လကွာတဲ့အခါ ဒီနရော ဒီအခြိနျမှာပဲ ပွနျဆုံဖို့ ခြိနျးခဲ့ပါတယျ…
ဒီဇာတျကားရဲ့ အဆုံးသတျကတော့ ဒီထိပါပဲ….Celine နဲ့ Jesse တို့ဟာ သူတို့ ကတိတှအေတိုငျး ပွနျတှခေဲ့လား၊ မတှခေဲ့ဘူးဆိုတာကို သိရဖို့ Before ပရိသတျတှဟော ၁၀နှဈနီးပါးလောကျ စောငျ့ပွီး Before Sunset မှာမှ အဖွကေို ရှာခဲ့ကွရပါတယျ။
Related Article >>> စကားလကျဂြိုဟနျဆနျ တဈခတျေဖွဈစခေဲ့တဲ့ ခတျေလှနျ သိပ်ပံ စိတျကူးယဉျ ဇာတျကား (၂)ကား
Before Sunset ရဲ့ ဇာတျလမျးအစကတော့ ပွငျသဈက စာအုပျဆိုငျလေးတဈဆိုငျရဲ့ စာအုပျမိတျဆကျပှဲလေးမှာ။ စာအုပျဆိုငျလေးက သေးသေးလေး။ စာရေးဆရာက Jesse ။ ဟုတျတယျ… Jesse က လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈနီးပါးလောကျက သူ့ရဲ့ အခဈြဇာတျလမျးလေးကို စာအုပျပွနျရေးထားတာ။ သူနဲ့ Celine တို့ရဲ့ဇာတျလမျးလေး။
Celine က အဲဒီ စာအုပျဆိုငျကို လာခဲ့တယျ။ ထုံးစံအတိုငျးပဲ သူတို့ဟာ ပဲရဈရဲ့ လမျးတှပေျေါမှာ လမျးလြှောကျရငျး စကားတှနေဲ့၊ အရမျးကို အဓိပ်ဗာယျပွညျ့ဝလှတဲ့ စကားတှနေဲ့ တဈယောကျကို တဈယောကျ နားလညျဖို့ ကွိုးစားခဲ့တယျ။ ဘာလို့ဆို သူတို့ မတှရေ့တာဟာ ဆယျနှဈနီးပါးတောငျ ကွာသှားခဲ့ပွီကိုး…
Related Article >>> သငျခနျးစာတှအေမြားကွီး ယူလို့ရနိုငျမယျ့ ဘောလိဝုဒျဇာတျကား ၂ကား
Before Midnight မှာတော့ အသကျကွီးကွီးစုံတှဲတဈတှဲဟာ ကတောကျကဆဖွဈနကွေတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ နားလညျပေးဖို့ ကွိုးစားရငျး သူတို့နှဈယောကျရဲ့ နှလုံးသားတှဟော အလှမျးဝေးနကွေတယျ။ ဟုတျတယျ… သူတို့ဟာ လှနျခဲ့တဲ့ အနှဈ နှဈဆယျလောကျက ရထားပျေါမှာ ဆုံခဲ့ပွီး စကားတှထေဲမှာ နှလုံးသားခငျြး နီးစပျခဲ့သူ ၂ယောကျ။ အဲဒီတုနျးက ရနျဖွဈနတေဲ့ ဂြာမနျလငျမယား၂ယောကျကွောငျ့ သူတို့ ဆုံတှခေဲ့ကွရတယျဆိုတာလညျး မသိတော့ဘူး။ သေးငယျတဲ့ ကိစ်စလေးအပျေါမှာ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဝေးကှာခဲ့တဲ့ နှလုံးသားတှဟော…..
ကဲ… ဝငျဒီ အတတျနိုငျဆုံးတော့ Spoil အနညျးဆုံးဖွဈအောငျ ရေးထားပါတယျနျော။ ကွညျ့ဖူးတဲ့ ယောငျးတှေ ရှိပမေဲ့ မကွညျ့ဖူးတဲ့ယောငျးတို့လညျး ကွညျ့ဖွဈအောငျ တိုကျတှနျးခငျြပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အထဲက ဇာတျကောငျနှဈယောကျ ပွောသှားတဲ့ စကားတှဟော အရမျးလှတယျ။ ရိုးမနျ့ဈ… လကျတှဘေ့ဝနဲ့ အလှမျးကှာနတောမြိုးမဟုတျဘဲ အရမျးကို လကျတှကေ့လြှနျးလှတဲ့ ဇာတျလမျးနဲ့ ဇာတျညှနျးကွောငျ့ ဘဝမှာ ကွညျ့ကို ကွညျ့ရမယျ့ ဇာတျလမျးစာရငျးထဲ ထညျ့သငျ့တဲ့ကားတှပေါလို့ ညှနျးပေးလိုကျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ..
Tags: Before, Before Midnight, Before sunrise, Before sunset, Movie review, Trilogy
နေမကောင်းတဲ့အခါ အလုပ်ကို ခွင့်ဘယ်လို တိုင်မလဲ?
ဒီလို အချက်တွေရှိလာပြီ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အချစ်ရေးကို တာ့တာပြလိုက်ပါတော့...
Windy November 20, 2018
Hnin Ei Oo May 9, 2019
Wathun April 27, 2019
“မဟူရာရုပ်ရှင်ရုံ” ဇာတ်ကားက သွားကြည့်ဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလား ?